Kunetsekana kwakawanikwa mu = Android) iyo inoita kuti zvikumbiro zvakashata zvipfuure sezviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Vatsvagiri vekambani yekuchengetedza Promon vakaburitsa nekutumira pane yako blog kukuvara kuri kukanganisa mamirioni eApple mafoni. Uku kunetsekana kunowanikwa kuri kushandisirwa nesoftware yakaipa yakagadzirirwa kubvisa maakaundi ekubhangi evashandisi vane hutachiona.
Uku kunetseka inobvumira zvinokuvadza kuti zviite kunge zviri pamutemo izvo zvinangwa zvatove nekuisa uye kuvimba. Uku kunetseka inobvumira programu yakaipa kukumbira mvumo uku uchiita seyakafanira kunyorera. Anorwisa anogona kukumbira kuwana kune zvese mvumo, kusanganisira maSMS, mapikicha, maikorofoni, uye GPS, zvichimubvumidza kuverenga mameseji, kuona mafoto, kuteerera hurukuro, uye kuteedzera mafambiro emunhu wacho.
Nekushandisa kushomeka uku, chishandiso chakaipa chakaiswa pachigadzirwa chinogona kubata mushandisi, Naizvozvo, kana iwe ukabaya pikicha yechishandiso chepamutemo, iri vhezheni ine ngozi inowanikwa pachiratidziri.
Kana munhu akuvara apinda ruzivo rwavo rwekupinda pane ino interface, ruzivo rwekuvanzika runobva rwatumirwa kune anorwisa, uyo anogona kuzobatanidza nekudzora manyorerwo anogona kunge aine ruzivo rwakanyanya.
Iyo kushushikana kwainzi StrandHogg zvichireva kune imwe yekare yeNorse iyo yakasarudza maViking matekiniki ekurwisa nzvimbo dzemahombekombe kuti vapambe uye vasunge vanhu kuti vanunurwe.
"StrandHogg, yakasarudzika nekuti inobvumidza kurwisa kwakaomarara pasina kudzika mudziyo, inoshandisa kushomeka kweiyo Android multitasking system kutanga kurwisa kune simba kunotendera zvinokuvadza kuita kuti zviite kunge chero chimwe chinhu pachigadzirwa.
"Promon anga achitsvaga malware-epasi chaiwo anoshandisa njodzi iyi yakakomba uye aona kuti zvikumbiro mazana mashanu zvinonyanya kufarirwa (zvakarongwa ne 500 Subject Barometer) zviri panjodzi, neshanduro dzese dzeAroid dzakanganiswa.
Kune rumwe rutivi, Lookout, mupi wekuchengetedza nhare uye mudiwa waPromon, akazivisa kuti yakawana zvikumbiro makumi matatu neshanu zvakashandisa njodzi iyi chitupa. Izvo zvakashata maapplication zvaisanganisira akasiyana eBankBot banking Trojan. BankBot yanga ichishanda kubvira 2017, uye malware apps akawanikwa kakawanda pamusika weGoogle Play.
Iko kunetseka kwakanyanya zvakanyanya mushanduro 6 kusvika 10, iyo zvinoenderana nenhoroondo yeanosvika makumi masere muzana emafoni eApple pasi. Kurwiswa mushanduro idzi kunotendera zvinokuvadza kukumbira mvumo uchizviratidza semashandisirwo ari pamutemo.
Iko hakuna muganho kune mvumo iyi yakaipa maapplication anogona kutsvaga. Kuwana mameseji, mapikicha, maikorofoni, kamera uye GPS ndizvo zvimwe zvinobvumirwa. Kudzivirirwa kwemushandisi chete ndiko kubaya "kwete" kune zvikumbiro.
Iyo kusagadzikana kuri mune basa rinozivikanwa seTaskAffinity, multitasking basa iro inobvumira kunyorera kutora humbowo hwemamwe mafomu kana mabasa kumhanya munzvimbo dzakawanda.
Zvirongwa zvisina kunaka zvinogona kushandisa chinhu ichi kutsanangura TaskAffinity yeimwe kana yakawanda yemabasa ako kuti afananidze zita repakeji rekunyorera kwechitatu-bato kunyorera.
Promon akati Google yabvisa maapp yakaipa kubva ku Play Play, asi kusvika parizvino kusagadzikana kunoratidzika kunge hakuna kugadziriswa pane ese mavhezheni e Android. Vamiriri veGoogle havana kupindura kumibvunzo nezvekuti njodzi ichagadziriswa riini, huwandu hwemaGoogle Play maapps ari kushandiswa, kana huwandu hwevashandisi vekupedzisira vanokanganiswa.
StrandHogg inokonzeresa kutyisidzira kukuru kune vashandisi vasina ruzivosaka avo vane ruzivo rwekuziva kana humwe hurema hunoita kuti zviome kunyatsoteerera maitiro asina kujeka mumaapp.
Zvakadaro, pane zvinhu zvakati wandei izvo vashandisi zvavangaite kuti vaone zvakashata maapp. kuyedza kushandisa kusagadzikana. Zviratidzo zvekufungidzira zvinosanganisira:
Chishandiso kana sevhisi iyo iwe watove wakabatana nayo inoda kuti iwe upinde.
Mvumo pop-ups isina zita rekushandisa.
Mvumo dzakakumbirwa dzechikumbiro icho chisingafanirwe kuda kana kuda mvumo dzakakumbirwa. Semuenzaniso, Calculator application inokumbira mvumo yeGPS.
Typographical zvikanganiso uye zvikanganiso mushandisi interface.
Mabhatani uye zvinongedzo mumushandisi interface zvisingaite kana zvadzvanywa.
Bhatani rekuseri harisi kushanda sezvanga zvichitarisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kunetsekana kwakawanikwa muApple iyo inoita kuti zvikumbiro zvakashata zvionekwe zviri pamutemo